YAANYADA CHERRY - YAR, LAAKIIN FOG. SHARAXAADA NOOCYADA UGU FIICAN - NOOCYO CHERRY AH
Ugu Weyn Ee Noocyo Cherry ah
Noocyada ugu wanaagsan ee yaanyada cherry
Wadanka yaanyada cherry waxaa loo arkaa in uu yahay Koonfurta Ameerika, ama halkii, dalka Peru.
Ereyga cherry waa tarjumaadda ereyga Ingiriisiga cherry, taas oo macnaheedu yahay "cherry".
Yaanyadaas si buuxda u caddayn magaca, maadaama ay ka yar yihiin noocyada caadiga ah ee yaanyada.
Yaanyadaasi waxay u muuqdaan kuwo aad u soo jiidasho leh waxayna hore u yaqaaneen bannaanka u. Tirada goobaha leh dhowr kallood oo yaanyo cherry ah ayaa si degdeg ah u kordhaya.
Ma rabtaa inaad doorato noocyo cusub oo beertaada ah? Dabadeed macluumaadkani waa adiga!
Cherry Licopa kala duwan
Hel caadadaada ciidda. Geedka hore u bislaaday, dhicin 90 - 95 maalmood.
U diyaari duurka, oo leh burushyo adag oo fudud. In burush fudud 8 - 10 yaanyo ku xidhan yihiin. Miraha waa oval, cas, miisaan ka badan 40 g.
Yaanyada Kuwaas si wanaagsan loo qaado, iyo dhadhanka weyni ma beddelo.
Cuntada waa 12-14 kg / m2. Aan saameynin fayruuska masagada yaanyo, caanaha nematode iyo verticillus. Midhaha miraha dhexjira waa mid aad u faa'iido badan sababtoo ah xoojinta sii kordhinta qoxootiga ee qashinka.
Bilaabid sii kordhaya duurka u baahan tahay geedo. Beeridda abuurka ah waa in la sameeyaa horraantii Maarso, sidaa darteed geedo waxay noqon doontaa mid raaxo leh heerkulka qolka.
Goobta ugu wanaagsan ee weelka leh geedo waxay noqon doontaa koonfurta ama dhinaca bari ee aqalka, laakin doorasho balaaran. Aad u badan waxaa muhiim ah in lagu waraabiyo geedo.
Marka sii kordhaya ee guriga for geed kasta oo baadiyaha u baahan yihiin si ay u qoondeeyaan dheriga ubax weyn. Haddii aad qorsheyneyso inaad yaanyadaas ku beerato goobta, waxaa fiican inaad sameyso ilaa 60 cm oo u dhexeeya dhirta ku xiga.
Sure ilaa waxaad u baahan tahay inaad xirto, iyo naqshad adag oo adag. Waxa kale oo loo baahan yahay joogto ah, laakiin waraabin yar oo miisaaman. Haddii ay duurka u bilaabeen in ay qudhmi, ka dibna qoyaanka dhulka ku badan yahay.
Haddii miraha uu bilaabo inuu jabo, ka dibna qoyaanku kuma filna. Waxaa lagama maarmaan ah in si caadi ah loo kabo culeyska baadiyaha. The aqalka dhirta lagu koriyo waa in ay si joogto ah u hawo, tan iyo yaanyada cherry ay u soo gaadhay phytophthora.
Kala sooc "Kishmish Orange"
Hybrid, waxaa loola jeedaa yaanyada dhexdhexaad ah hore, ripens 100 - 105 maalmood. Xayawaanku waxay sida caadiga ah u gartaan, illaa 2 m.
Miraha waa wareegsan, midab leh oo casaan leh, oo miisaankiisu yahay 15 - 20 g. Burushka wuxuu ka kooban yahay celcelis ahaan 20 miraha. Mature miraha aan la maydhin, ha jajabin.
Dheecaan ka dib iyo miraayada tubaakadu ma waxyeelaynayso yaanyada.
Geedo loo baahan yahay in la jiifiyo waqtiga caadiga ah. Daryeelka geedo waa mid caadi ah waxaana ka mid ah waraabinta joogtada ah, ka dib marka ay muuqato caleen labaad, iyo sidoo kale quudinta 2 ilaa 3 jeer.
Gawaarida dhulku waa ka dib marka cimiladu diirto. Nidaamka degitaanka 50x60 cm.
Garter qasab ah. Waa pasynkovanie suurad wacan. Waxaa lagama maarmaan ah in ay si toos ah biyaha ugu diiriso waraabin dhexdhexaad ah oo ka hooseysa xididada dhirta. Si joogto ah loo baahan yahay codsiga nitrogen ee foomka of amooniyam, si ay duurka u lahaa xoog dheeraad ah ee koritaanka.
Waxaa sidoo kale xiiso leh in laga akhriyo noocyada yaanyo loogu talagalay qallaf furan.
Kala sooc "Cherry Mio"
Bacriminta hore, miraha waxay diyaar u yihiin 90 - 95 maalmood ka dib biqilka.
Ku habboon doorka yaanyada gudaha ama lagu koriyo, iyo sidoo kale inay dareemaan raaxo dhulka.
Darajo aan caddayn. Miraha waa wareegsan, casaan, miisaankeedu yahay ilaa 35 g 15 ilaa 20 yaanyo ku koraa hal burush. Dhalidda sarelaga bilaabo 1 jibbaaran. mitir waxaad ka qaadan kartaa 13 - 15 kg dalagga.
Waxay u fiican tahay in la geliyo dhalooyinka, iyo sidoo kale qurxinta for suxuunta cusub.
Nidaamka beeritaanka geedo caadiga ah ee noocyo kala duwan ee tamaandhada. Beeridda beereed waa in la sameeyaa dhamaadka bisha Febraayo. Fasaxyada fasalka waxay u baahan yihiin heerkul sarreeya (30 ° C) koritaanka caadiga ah.
Baahida si joogto ah uga saari iyo caleemaha hoose, sida, iyo iyada oo aan lahayn, baadiyaha culeyska ayaa abuuri doona cadaadis dheeraad ah.
Daaweynta fungicides ama xitaa caleemo buluug ah ayaa lagama maarmaan u ah si loo ilaaliyo dhirta laga bilaabo phytophtoras. Garter sidoo kale loo baahan yahay.
U kala saar "Cherry Black"
Waxay si dhakhso ah u raraysaa - 65 maalmood.
Naqshadeynta isticmaalka banaanka. Warshad aan dhicin, oo aad u dheer (illaa 3.5 m), waxay ku koraan marxalad keliya.
Miraha qaabka guud, guduud, ku dhowaad madow, macaan ee dhadhanka, aad u casiir leh.
Miisaanka wuxuu gaari karaa 10 - 30 g. Waxaa suurtagal ah in la isticmaalo ururinta iyo ilaalinta.
In cimilada diiran, waxaad si toos ah u gelin kartaa dhulka, sidaas oo kale marxaladda geedo sii kordhaya. Haddii ay sidaas u koraan duurka, ka dibna isla markiiba ka dib markii miraha la dhigay, waxaad u baahan tahay in lagu rakibo arsaha biraha ka badan oo isku xigta abuur ah, ka dibna u fidiso filim caag ah on cirifka.
Haddii geedo la koray, ma jiraan wax isbadal ah oo geedi socodka ah. Nidaamka degitaanka sidoo kale waa mid caadi ah - 50x70 cm.
Daryeelka sidoo kale waa caadi. Waraabinta wakhtiga ah, quudinta joogtada ah, pasynkovanie iyo garter ayaa ka caawin doonta dhirta inay si fiican u koraan.
Labada aqalka dhirta lagu koriyo iyo dhul furan waxay ku habboon yihiin noocyada kala duwan. Kala duwan dhexdhexaadinta hore (100 - 110 maalmood).
Tamaandho waa mid aad u macaan, dhalaalaya oo huruud ah oo qaab ah dhibco. Kor u miisaanka ilaa 30 garaam. Xayawaanka qiyaas ahaan, gaari 1 m dherer ahaan.
Mashruucyada beeritaanka ayaa wax yar ka duwan, oo ah 70x40cm. Bishii Maarso, waxaad u baahan tahay inaad abuurto geedo geedo ah, oo aad dib ugu soo celiso dhulka horraantii Juun. Qaadashada khasabka ah ee geedo. Daryeelka geedo caadi ah.
Waraabinta qasabka ah biyaha heerkulka qolka dabacsanaanta ciid ka dib markii waraabiyo, pasynkovanie, iyo sidoo kale garter. Ciidda waa in si joogta ah loo googooyaa caws ama cawska.
Kala sooc "Minibel"
Waxaa lagu abuuri karaa jawi kasta. Kala duwanaanta hore - wuxuu kudhaca 90 - 100 maalmood.
Buundadu waa yar yihiin, ilaa 50 cm oo dherer ah, iswada.
Miraha miisaankeedu yahay ilaa 25 g, casaan, oo leh dusha sare, macaan.
Waxaad ka boodi kartaa marxaladda geedo sii kordhaya.
Seeds lagu beeray karaa isla markiiba dhulka, laakiin caleemaha yar yar u baahan doonaa in la ilaaliyo.
Nidaamka degitaanka waa heer - 50x50 cm.
Daryeelka marxaladaha caadiga ah ee yaanyada.
Waxaad u baahan tahay in aad si joogto ah u caleemaha ciriiriga, beeri dhulka, biyaha duurka, iyo xir.
Kala duwanaan "Cherry Lisa"
Hybrid. Wuxuu si dhaqso ah u barbardhigayaa 90 ilaa 95 maalmood. Xayawaanka ayaa go'aamiya. Miraha ayaa wareegsan, huruud ah, miisaankoodu yahay ilaa 30 g. Wax saameyn ah ma leh yaanyo yaryar.
Dhalidda sare - 10 - 12 kg halkii qaybood. Waxaa lagu kori karaa dhul furan iyo jawi ammaan ah.
Ma jiraan wax xeelado gaar ah oo laga soo qaaday dhacdooyinka caadiga ah. Waxaa lagama maarmaan ah in la koro geedo tayo wanaagsan leh oo u baahan doona in lagu beddelo dabayaaqadii May. Geedo u baahan tahay in la adkeeyo.
Waraabinta waxaa si fiican loo sameeyaa, laakiin ma aha mid aad u badan. Waxaa lagugula talinayaa in aad qoyaanka u keento dhulka 4 ilaa 5 maalmood.
Bacriminta bacriminta dabiiciga ah ayaa sidoo kale loo baahan yahay. Dhammaan duurka waxay ku xiran yihiin inay jeexjeexaan iyo qoryaha.
Qaar ka mid ah duurka ee yaanyada cherry ku farxi doonaa ma aha oo kaliya xagaaga, laakiin sidoo kale inta lagu jiro dhaxan. Waxyaabaha kale, tamaandhadaani waxay qurxin doonaan gurigaaga mid aan ka xuneyn ubaxyada gudaha.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo Cherry ah 2019